I-OnePlus 6 ifumana i-5 ngaphandle kwe-10 kumanqaku e-iFixit | I-Androidsis
Ngalo lonke ixesha i-terminal entsha ifika kwimarike, abafana kwi-iFixit babamba iyunithi kwaye bayidibanise ngokupheleleyo, ukujonga ukuba yeyiphi ukulungiswa kwesalathiso ezinikezelwa sisiphelo sendlela. Amanqaku aya ku okanye kwi-10, nge-0 lelona linqaku libi kwaye i-10 lelona lifanelekileyo, esivumela ukuba sifumane umbono wento esinokuyilindela kwisiphelo.
IFixit idibanisa ngokupheleleyo i-terminal kwaye iyinike amanqaku, esekwe kwi Ubunzima okanye lula ekuhlukaniseni nasekutshintsheni iinxalenye oko kungaphula okanye kuyeke ukusebenza, ngaphandle kwexabiso lenxalenye. Isiphelo sokugqibela esidlulile ezandleni zaba bafana yi-OnePlus 6, enye yezona ziphelo zilindelekileyo zonyaka kwaye okwangoku, yamkelwe ngokugqwesileyo.
I-OnePlus 6 ifumene amanqaku 5 ngaphandle kwe-10, ukuhlala phakathi phakathi kokulungileyo nokubi. Nangona ibhetri ibonisa ileyibhile echaza ukuba ayinakutshintshwa, oku kunokwenzeka, kodwa ngomonde omncinci kuba uqhotyoshelwe kwitheminali. Ngaphandle kwenyani yokuba i-OnePlus ayinikezeli ngokuchasana okuqinisekisiweyo kwamanzi kunye nothuli, umda wesiphelo unikezela ngamanyathelo okhuselo ngokuchasene namanzi kunye namaqhosha omzimba anaso.
Eyona ngxaki inkulu i-iFixit ejongene nayo xa kusasazwa i-terminal, siyifumana kwifayile ye- isixa esikhulu seglue ukuba umenzi usebenzise ukunamathisela ngokufanelekileyo isikrini se-OLED kwisisu semoto. I-IFixit ibanga ukuba kukho amathuba aphezulu okuba iscreen terminal siza kuqhekeka ukuba sizama ukusidibanisa. I-OnePlus 6 ifumana amanqaku angcono kuneGPS S9 +, i-terminal efumene inqaku le-4 ngaphandle kwe-10. amanqaku anokubakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-OnePlus 6 ifumana i-5 ngaphandle kwe-10 kumanqaku e-iFixit